छोराछोरीको मैत्रीको लागि छनौट गर्ने कस्तो प्रकारको संगठन? यदि सबै विचारहरू तपाईँलाई प्रतिबन्ध लगाउँछन् र केहि चीजहरू नबनाउँदैनन् भने, बचपनबाट प्रसिद्ध प्रेमी कथाहरु बाट मद्दत माग्दछन्। सबैजना काठको केटा बरुटोनो - "गोल्डन कुञ्जी" को कथालाई थाहा छ। यस कथामा क्यारेक्टरहरूको एउटा पाडले आर्टोनोन हो, यो नायकको सट्टा कुनै पनि केटाको लागि एकदम सही छ!
एक फैंसी कपडा कसरी बनाउने?
कारखाना उत्पादनको कार्निवल पोशाक कहिलेकाहीँ निकै महँगो हुन्छ। किन "एक-अफ" सूटमा धेरै पैसा खर्च गर्छ भने, यदि तपाई यसलाई आफैं बनाउन सक्नुहुन्छ? तपाईंलाई व्यावसायिक समुद्री खाना पनि हुन आवश्यक छैन। Artemon को पोशाक को वर्ण एकदम सरल छ। परी कथामा तिनी ठूलो ठूलो पूडलको रूपमा वर्णन गरिएको छ। गाढा टोनहरूको आधारभूत कपडाहरू छान्नुहोस्। धेरै राम्रो छ भने तपाईसँग कालो फर भाँडा छ। फर को टुक्रा या टुकडे देखि तपाईं सानो कफ सिलाई सकते हो, कलाई र एंकहरु राख्नुहोस। एक समान पूर बनाउन नबिर्सनुहोस्, टिप मा एक pompon संग एक वास्तविक पूडल जस्तै। यदि तपाईं आफ्नो सेन्टनेसोनको सट्टा आफ्नो लुगा लगाएर कपडा बाहिर लैजानुहुन्छ जसलाई तपाईंले पछि लगाउने योजना बनाउनुहुन्छ, सबै भित्री विवरणहरू हटाउन सकिने हुन्छ। उदाहरणको लागि, पूरै राम्रो बनाइएको बुना भयो बेल्ट वा लोचदार ब्यान्डमा।
तस्विरको महत्त्वपूर्ण विवरण
कुनै पनि पोडले सुनको घुमाई कानको घमन्ड गर्न सक्छ। यस नियममा अपवाद छैन शानदार Artemon। सूट कान संग एक टोप पूरा गर्न सकिन्छ। तिनीहरू बुनका लागि फर वा चम्किलो थ्रेडहरू बनाउन गाह्रो हुन्छन्। त्यस्ता कानहरू कुनै पनि कालो टोपी वा रिममा खसेका छन्। यदि तपाइँसँग यस्तो सामग्री छैन भने, कागजबाट हेड कार्निवल टोपी बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। उपयुक्त आकारको दुई कानहरू काट्नुहोस्, कालो पानाबाट फ्रिङमा पेपर स्ट्रिप्स काटेर तिनीहरूको बाह्य पक्षहरू गोंद गर्नुहोस्। मोटो पेपरबाट अलग, एक सिर को चारै ओर रिंग ले एक पट्टी बाहिर र गोंद कट। परिणामलाई खाली गर्न कानहरू संलग्न गर्नुहोस्। गर्दनमा नीलो वा रातो साटन धनुष एक सहायक हो जुन लगातार कथा आर्टोनोनमा लगातार पहने थियो। यो क्यारेक्टरको भित्ताको लागि सूटको लागि यो सजावट पूरै उपयुक्त हुनेछ। एउटै टेपबाट तपाई सानो कुरो बनाउन सक्नुहुन्छ र फर फर कफमा संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ।
एक मनका crochet टाई कसरी गर्ने: फोटो, वर्णन, मास्टर वर्ग
बोलिभर्ड रिंग रूसी राजधानीको ऐतिहासिक स्थल हो
Multivarka मा दूध भात porridge -, स्वादिष्ट छिटो र सजिलो